नविल बैंकका सिईओ अनिलकेशरी शाह तस्विर: महेश प्रधान
नविल बैंकका सिइओ हुन्– अनिलकेशरी शाह । एक सफल सिइओको रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा उनको जति चर्चा हुन्छ, उनको जुँगाको पनि चर्चा पनि कम हुादैन । आखिर जुँगाप्रति उनको मोह किन ? के कारण जुँगा पाल्न थाले ? उनको जुँगाका फ्यान कस्ता छन् ? भन्ने सन्दर्भमा साप्ताहिककर्मी महेश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी :
जुँगा पाल्ने सोच कसरी आयो ?
आजभन्दा करिब ४ वर्षपहिला सिंहदरबार अगाडि ट्राफिक जाममा परो । अगाडी रहेको पृथ्वीनारायण शाहको मूर्तिमा मेरो नजर ठोक्कियो । केहीबेर हेरिरहेँ । उहाँको जुँगाले मेरो मन जित्यो । मलाई लाग्यो– उहाँले एकीकृत बनाएको देशमा एउटा नागरिक भएर बाँचिरहेको छु । देशका लागि मैले केही गर्न सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन, तर उहाँको जस्तै जुँगा पालो भने आफैंलाई केही प्रोत्साहन होला कि भनेर जुँगा पाल्ने सोच बनाएँ ।
सुरुमा जुँगा आउँदा कस्तो लागेको थियो ?
बुबाकोजस्तै सेभिङ गर्नेगरी दाह्री–जुँगा कहिले आउला भनेर पर्खेको थिएँ । त्यसैले सुरुमा दाह्री–जुँगा आउँदा खुब रमाएँ । तर यस्तो जुँगा थिएन । सुरुमा त गज्याङगुजुङ थियो । पूरै आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि डर थियो ।
अहिलेको जस्तो बनाउन कति समय लाग्यो ?
कम्तीमा पनि ६/७ महिना लाग्यो । त्यो बेलामा मैले कसरी जुँगा पाल्ने भनेर युट्युबमा पनि हेरेँ । जुँगामा लगाउने जेल पनि पाइँदोरहेछ । जेल लगाएर जुँगा ठाडो पार्न थालो । त्यो बेलामा कहिले जुँगा पातलो हुने, कहिले बाक्लो हुने । तर अहिले मेरो जुँगा ठीक साइजमा आएको छ ।
विश्वप्रसिद्ध व्यक्तिमा क–कसको जुँगा मनपर्छ ?
पहिलो त मलाई पृथ्वीनारायण शाहकै जुँगा मनपर्छ । साथै स्पेनको आर्किटेक्ट आर्टिष्ट डालीको जुँगाको पनि फ्यान हुँ ।
तपाईंको जुँगा बलिउड अभिनेता रणवीर सिंहको जस्तो छ भन्छन् नि ?
मलाई पनि धेरैले ‘रणवीर सिंहको जस्तो जुँगा बनाएको हो ?’ भन्नुहुन्छ । तर त्यस्तो होइन । मैले रणवीर सिंहको होइन, पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो बनाउन जुँगा पालेको हुँ । हामी नेपालीहरू आफ्नो देशको कला, संस्कृतिलाई छोडेर बलिउडप्रति बढी झुकाव राख्छौं । त्यसैले रणवीर सिंहको जुँगा देखेका छन् । तर, पृथ्वीनारायण शाहको जुँगा नदेखेकाले यस्तो प्रश्न गर्छन् ।
जुँगालाई पितृसत्ताको प्रतीक पनि भन्छन् नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । ट्याटु हानेका मान्छे गुण्डा हुन्छ भन्छन् । मेरो हातमा ट्याटु पनि छ तर म गुण्डा छुजस्तो लाग्दैन । त्यस्तै, कानमा मुन्द्रा लगाएका मानिसहरू बलवान् हुन्छन् भनिन्छ, त्यस्तो पनि होइन । त्यसैले मान्छेका कुनै कुरालाई हेरेर पूर्वअनुमान गर्नु राम्रो हुन्नजस्तो लाग्छ । तर, कतिपयले भने ‘अनिलजी, यो जुँगा किन पाल्नुभएको ?’ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । म उहाँहरूलाई ‘दाह्री–जुँगा पालेर नराम्रो हुने र नपाल्दा राम्रो हुने होइन । यो त मेरो एउटा स्टाइल हो’ भन्ने गर्छु ।
यसले मानिसको व्यक्तित्वमा महत्व राख्छ ?
व्यक्तित्वमा कतिको महत्व राख्छ भन्नेचाहिँ थाहा छैन । कसै–कसैले ‘कन्फिडेन्स’का लागि पनि जुँगा राख्छन् होला । तर एउटा कुराचाहिँ के हो भने मलाई एकपटक देखेको मान्छेले हत्तपत्त बिर्सिदैनन् । त्यो अनिल शाह भनेर होइन, जुँगाकै कारणले हो ।
आफ्नो जुँगाको के कुरा विशेष लाग्छ ?
अहिले जुँगाले गर्दा मेरो रुटिन नै बदलिदिएको छ । यदि जुँगा नहुादो हो त बिहान उठ्यो, मुख धोयो, फ्रेस भयो, सक्कियो । तर, जुँगा भैसकेपछि बिहान उठ्नेबित्तिकै यसलाई मिलाउनुपर्‍यो । कहिले काट्नुपर्छ, कहिले जेल लगाएर कोर्नुपर्छ । त्यही भएर जुँगा पाल्नाले बिहानको एउटा काम निस्किएको छ । हतार भएको बेलामा त आफ्नै जुँगादेखि रिस उठ्छ । तर के गर्नु पालिहालियो, राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
यसका लागि बिहान कति समय दिनुहुन्छ ?
कम्तीमा पनि १० मिनेट समय दिन्छु । बेलुका पनि सुत्ने बेलामा जुँगामा तेल लगाएरमात्र सुत्छु ।
यससँग जोडिएका केही रमाइला अनुभव सुनाइदिनुस् न ?
केही समयअघि इजिप्ट घुम्न गएको थिएा । त्यो बेलामा प्लेनमा बसेदेखि ओर्लिने बेलासम्म र बाटोमा पनि हजारौं मान्छेले मेरो जुँगालाई मात्र हेरे । होटलमा गएपछि पनि सबैले औंलाले देखाउँदै मेरो जुँगाको तारिफ गरेको देखेँ । त्यो पल एकदमै सुन्दर थियो । यस्तै, तिब्बत जाँदा पनि राजा स्रङचङ गम्पोकोजस्तो जुँगा भनेर धेरैले तारिफ गरेका थिए । निकै रमाइलो अनुभव भएको थियो ।
तपाईंका जुँगाका फ्यानहरू कस्ता छन् ?
अहिले म नबिल बैंकमा छु । त्यहाँका केही कर्मचारीहरूले पनि बिस्तारै जुँगा पाल्न थालेको देखिरहेको छु । धेरै युवाहरूले पनि जुँगा पाल्ने प्रयास गरेपछि ‘तपाईंकोजस्तै जुँगा पाल्ने कोसिसमा छु’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो पठाउनुहुन्छ । त्यस्तै, कतै घुम्न गएको ठाउँमा पनि मेरो जुँगा देखेर नै सेल्फी खिच्न आउनुहुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो जुँगा आफैंलाई राम्रो लाग्छ । नेपालमा अहिलेसम्म मेरोभन्दा राम्रो दाह्री धेरैको देखेको छु तर मेरो भन्दा राम्रो जुँगा कसैको देखेको छैन ।
यसका लागि कति खर्च गर्नुहुन्छ ?
खासै हुँदैन । मसँग दुईवटा सानो काइँयो छ । जुँगाको जेलमा अलिकति खर्च हुने हो, त्यो पनि एकपटक किनेपछि ६ महिनासम्मका लागि पुग्छ । यसलाई समय चाहिँ दिनुपर्छ । तर, खर्च धेरै हुँदैन ।
कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ ?
एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु । तर कतिपय मेरा आफन्ती बाजेबज्यै भने किन जुँगा पालेको भन्नुहुन्छ । अधिकांशले मेरो जुँगाको प्रशंसा नै गर्नुहुन्छ ।
जुँगा कहिल्यै नकाट्ने हो ?
झोाक चल्यो भने कुनै दिन काट्न पनि सक्छु । कहिल्यै काट्दिन भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छैन । तर जुँगा काटेपछि आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा तर्सिन्छु होलाजस्तो लाग्छ । त्यसैले हत्तपत्त जुँगा काट्ने आँट गर्दिनँ ।
जुँगा पाल्ने रहर गर्नेहरूलाई भनिदिनुस् न, तपाईंकोजस्तै जुँगा बनाउन के गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा त मेरोजस्तो जुँगा बनाउन राम्रोसँग जुँगा पलाउनुपर्छ । यदि बाक्लो जुँगा आउँदैन भने नपाल्दै राम्रो हुन्छ । पाल्ने नै मन भए जुँगा बाक्लो बनाउनका लागि बेलुका सुत्ने बेलामा तोरीको तेल लगाउनुस् । आफ्नो मुखलाई कुन स्टाइलको जुँगा सुहाउँछ, त्यो हेर्नुस् । आफूलाई जुन राम्रो लाग्छ, त्यही स्टाइलको जुँगा पाल्नुस् ।